तपाईं संगीत यसलाई लागू यदि राम्ररी डिजाइन गरिएको प्रस्तुति, अझ राम्रो हुन सक्छ। विशेषज्ञहरु यस्तो मामला मा, यसको सामाग्री राम्रो दर्शक द्वारा कथित गरिनेछ भनेर भन्न र श्रवण यो धेरै nicer हुनेछ। तर कसरी प्रस्तुति संगीत राख्न? यस लेखमा हामी यो प्रक्रिया सबै सुविधाहरू विस्तार विचार गर्नुहोस्।
प्रस्तुति अडियो फाइलहरू क्रम को कर को प्रश्न एकदम विस्तार कार्यान्वयन गर्ने ओभरले प्रक्रियाको निगम "माइक्रोसफ्ट" को रूपमा, एकदम नियमित हुन्छ र सहज टाढा छ कि एक प्रकारले त गरेका छन्।
तुरुन्तै, हामी हालैको वर्ष थप प्रचलित छन् रूपमा हामी, एमएस कार्यालय 2010 उदाहरण प्रस्तुतीकरण सिर्जना प्रक्रिया विचार, र पछि याद गर्नुहोस्। साथै, अमीर यी कार्यालय संस्करण मा प्रस्तुति को लागि दर्ता।
तुरुन्तै, हामी अर्को कष्टप्रद हटाइ विकासकर्ताहरूले, याद संकुचित अडियो स्वरूप एक विशाल विविधता मा, तिनीहरूले प्रयोगकर्ता भेटी छैन बिल्कुल कुनै विकल्प, प्रयोग waw अझै पनि मात्र प्रस्ताव। आफ्नो संगीत संग्रह मात्र mp3 फाइलहरू छ भने, तपाईं आफ्नो रूपान्तरणको लागि केही साधन खोज्न छ। waw ढाँचामा संगीत स्थानान्तरण, हामी संगीत संग एक PowerPoint प्रस्तुति सिर्जना गर्न जारी।
नयाँ प्रस्तुति फाइल, को नाम संग एक मेनु खोल्छ जो "स्लाइड, जाने" देख सिर्जना गर्नुहोस्, वा अवस्थित कागजात खोल्न, ट्याब "एनिमेशन" जानुहोस् "संक्रमण को ध्वनि।" यो वस्तु "अन्य ध्वनि" मा क्लिक गर्न आवश्यक छ, र खोल्छ कि एक्सप्लोरर सञ्झ्यालको मदत पाएर तपाईं इच्छित संगीत एउटा अडियो फाइल हो आफ्नो कम्प्युटरमा जहाँ प्रणाली, निर्दिष्ट गर्नुहोस्। फेरि, तपाईं कहाँ झन्डा उल्लेख गर्नुपर्छ वस्तु "लगातार" मेनु खोल्नुहोस्।
दुर्भाग्यवश, तपाईंको परियोजना हरेक बिन्दु र स्लाइड त एक ब्याच ओभरले प्रदान गरिएको छैन रूपमा स्वयं सम्हाल्न छ। त्यसैले कसरी विधि यस्तो प्रस्तुति संगीत राख्न प्रयोग गर्न सकिन्छ प्रत्येक स्लाइड र एक्लै संक्रमण मा मात्र, ध्वनि अर्को परियोजना गर्न संक्रमण बिन्दुमा नष्ट हुनेछन्।
स्वाभाविक, यस्तो सल्लाह यस्तो परियोजनाहरूको डिजाइन मा आफ्नो पहिलो कदम लिइरहेका छन् जो शुरुआती लागि मात्र उपयुक्त छ। व्यवसायी पनि केही गर्न यस्तो scanty अवसर को काम सिर्जना रूपमा व्यावसायिक रुचि राख्नुहुन्छ। तर कसरी प्रदर्शित हुनेछ जो लगातार यो भर प्रस्तुति, संगीत राख्न? यो गाह्रो बनाउन।
ट्याब प्रयोग "सम्मिलित", इच्छित संगीत फाइल तपाईंको कागजात मा ठाँउ हो। सफलता को एक चिन्ह मा स्लाइड देखा एक वक्ता प्रतिमा रूपमा सेवा गर्नेछन्। फेरि, हामी "एनिमेशन" ट्याबमा प्रविष्ट गर्नुहोस्। "अनुकूलन एनिमेशन" लेबल बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। तुरुन्त कि पछि, तपाईं अगाडि "अनुकूलन एनिमेशन" worktop। यसलाई निर्दिष्ट फाइल, "शासक" को एक प्रकारको रूपमा डिजाइन लागि प्ले समय प्रदर्शन गर्नेछ।
यसलाई "प्रभावपरिमिति" एउटै विन्डोमा ड्रप-डाउन सूची मा क्लिक गर्नुहोस् र चयन गर्नुहोस्। चयन हुनेछ जो स्लाइडहरू एक इच्छित संख्या संग सांगीतिक साथमा जाने वस्तु सुत्छन् मौका प्रदान गर्दछ जो "समाप्त", को "प्रभाव" ट्याब, प्रकट गर्छ।
त्यसैले, तपाईं कसरी प्रस्तुति संगीत राख्न सिकेका!
तपाईँको कम्प्युटरमा एउटा अलार्म सेट गर्न दुई तरिकाहरू छन्
कसरी पावरपोइन्ट मा एक प्रस्तुति सिर्जना गर्न: पहिलो कदम
ध्वनि सम्पादक: ध्वनि प्रशोधनका लागि सरल कार्यक्रम को समीक्षा
मुक्त उत्पादनहरु को एक सिंहावलोकन: प्रतिलिपि डिस्क कार्यक्रम को लागि
FatSecret क्यालोरी काउन्टर छ - "एन्ड्रोइड" को लागि निःशुल्क अनुप्रयोग हो: समीक्षा
2013 मा विश्वविद्यालय प्रवेश को लाभ: परिवर्तन एक सिंहावलोकन
Makarov पेस्तोल - पौराणिक कथा को हतियार
स्कर्ट 2011 - हरेक स्वाद र हरेक महिला लागि।
Mastectomy - यो के हो? स्तन हटाउन सञ्चालन